1 Ndezvipi mazuva ekusununguka kwekusuruvara?
2 2 October: Mazuva Ose Okusvibisa
2.1 Sei zuva risina ruregerero nerunyararo?
3 November 25 zuva rekusarura vakadzi
3.1 Chikonzero chekuvapo kwezuva rino: November 25 zuva rekusasvibisa vakadzi
3.2 Sei uchikurudzira kupemberera kwezuva raNovember 25 kusasuruvara?
4 January 30 zuva rechikoro chekusagadzikana uye rugare
4.1 Sei zuva rekusasuruvara nerunyararo richipemberera paC30 munaJanuary rakasarudzwa muzvikoro?
5 19 November pasi rose zuva risina utsinye kune vana nevechidiki
5.1 Zuva rose rekusasununguka uye kudzivirira kushungurudzwa kwepabonde nekushungurudzwa
5.2 Zviratidzo zvechisimba chevana
6 Chirevo chekupedzisira pamusi wepasi rose wechisimba chisingaiti chisarudzo
7 Spain inotungamirira nyika kuti iende kune rimwe zuva rose rekusasununguka